OwaKwaShange Ukhala ngokusongelwa yinduna | News24
OwaKwaShange Ukhala ngokusongelwa yinduna
OWESILISA wasendaweni yaKwaShange ukhala ngenduna yendawo athi iyamusongela ngoba kubangwa indawo yokwakha.
UMnuz Thulani Maduna uthi lokhu kuza emva kokuba athenga iziza zokwakha ezimbili enduneni yakule ndawo uMnuz David Shange eminyakeni emithathu eyedlule kodwa emasontweni amabili edlule uthole ukuthi induna isiphinde yadayisela omunye umuntu indawo efanayo.
“Bengithi ngiyoyibheka njengoba ngilungiselela ukuqala ukwakha ngesikhathi ngifica omunye umuntu ecenta ethi indawo sekungeyakhe. Isiza esisodwa sasibiza uR1200 ngayikhokha yonke leyomali isihlangene yaba u-R2400.
“Ngaqala ngalungiselela ukwakha ngabiza nogeleja ukuba ungilungisele nokwathi uma sengizoqala ngashonelwa umfowethu ekhaya ngaeb sengima kancane.
“Ngithe sengiphinda khona kule ndawo ngenhloso yokwakha kwaphinde kwashona omunye umfowethu ngabambezeleka futhi. Ngesikhathi sengithi ngiyolungisa futhi emasontweni amabili edlule ngifice omunye umuntu ematasa ecenta. Ngithe uma ngimtshela ukuthi lena indawo yami wathi yena wayinikezwa induna sekungeyakhe,” kubeka yena.
Uthe ngemuva kokuthola lezi zindaba uzamile ukuxhumana nenduna ukuthola izimpendulo kodwa igcine isimusabisa ithi uma eke walusukumela lolu daba izomubona ukuthi ufana nobani.
“Bengifuna ukwazi ukuthi kungani enikeza omunye indawo ekubeni ngiyikhokhelile ngayiqeda. Kunalokho uvele wangaphumela obala wangitshela ukuthi iNkosi ekhiphe umyalelo wokuthi uma kuphela isikhathi eside umuntu engakhi endaweni leyo aseyithengile kumele idayiselwe omunye umuntu, wangisabisa nangokuthi uzongiqondisa uma ngike ngalusukumela lolu daba. Akukho muntu okutshela lokho uma ngabe usayithenga indawo kungani bakutshela sebeyidayisele omunye umuntu.
“Uma ubuza ngemali futhi bakutshela ukuthi imali ayibuyi. Ayibuyi kanjani imali ekubeni indawo isithathiwe yanikezwa omunye umuntu?.
“Ingiphatha kabi lento ngoba manje mina ngiyalahlekelwa kakhulu. Imali yami engathenga ngayo angiyitholi nendawo futhi angiyitholi.
“Angiyiphathike eyemali engangiqasha ngayo ugeleja njengoba wawungibiza imali engu-R4000 ngosuku. Lolu daba sengize ngalusa nakwiNgonyama Trust nalapho bafike bangitshela khona ukuthi angeke baze bakwazi ukuthi bangiphuce indawo yami sengiyithengile kodwa bathi angibhale incwadi ngibhalele imenenja yakhona.”
Induna yendawo uMnuz Shange walile ukuphawula ngalolu daba wathi alusekho ezandleni zakhe kodwa seluseMkhandlwini.